पुस्तक समीक्षा : शाही शासनको बन्दी मन्थन
२०६२/०६३ को आन्दोलनले मुलुकमा गणतन्त्रका लागि राजमार्ग तय गरेको थियो  । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्त गरेपछि गणतान्त्रिक आन्दोलनको आगोमा घिउ थपिएको थियो । त्यही क्रममा सयौं नेता तथा कार्यकर्ता गिरफ्तार परे । ज्ञानेन्द्रले निरंकुश शासन चलाउनुअघि कमै मात्र नेताले गणतन्त्रको पक्षमा बोलेको पाइन्थ्यो ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले चिनियाँ राजदूत होउ याङचीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर चिनियाँ कम्पनीको कामबारे सोधे । अनौपचारिक छलफल सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि याङचीले साँझ ट्वीटमार्फत जवाफ दिइन् । तत्काल प्रतिक्रिया नजनाउने चिनियाँ राजदूतले सार्वजनिक रुपमै जवाफ दिनुको गहिरो अर्थ रहेको कूटनीतिज्ञहरु बताउँछन् ।
दाहालको अभिव्यक्ति : जंगलप्रेम कि रणनीति ?
सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरेको १२ वर्षपछि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जंगल जाने कुरा किन गरे ? यसबारे सर्वत्र जिज्ञासा उठेको छ । ‘म फेरि एकचोटि सम्पूर्ण चिज त्याग गरेर जंगल जान सक्छु भन्ने विश्वास छ । मलाई पटक्कै गाह्रो लाग्दैन,’ उनले आइतबार राजधानीको मार्क्स जयन्ती कार्यक्रममा भने, ‘अर्को एउटा क्लाइमेक्समा यो पार्टी र आन्दोलनलाई लगेर माथि जाने विचार छ ।’
फोरम–नयाँ शक्ति एकीकरण : वैकल्पिक शक्ति बन्ने चुनौति
वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने भन्दै संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीको एकीकरण भएको छ । मधेस आन्दोलनबाट उदाएका फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र माओवादी युद्धबाट स्थापित भएका बाबुराम भट्टराईले गैर कम्युनिस्ट ‘समाजवादी पार्टी नेपाल’ पार्टी घोषणा गरेका छन् ।
अहिले नुन, सुन, लत्ताकपडालगायत लिन १२, १३ दिन पैदल हिँडेर नेपालगन्ज जानुपर्ने अवस्था छैन  । चालीसको दशकको मध्यसम्म नुन लिन रुकुमबाट नेपालगन्ज हाट गइन्थ्यो  ।
जनगायक जीवन शर्माले हालै गाएका छन्– छैन मेरो शरीरमा अत्तरको बासना, होला बरु जीउभरि पसिनाको गन्ध  । चाहिंदैन मलाई सिसाको महल, चाहिंदैन मलाई चमेलीको बास, यसै राम्रो छ यो मेरो जीवन, चाहिंदैन मलाई सम्पत्तिको रास  ।
फागुन १ पूर्व माओवादीका लागि महान् दिन हुन सक्छ । कांग्रेस र पूर्व एमालेका लागि पनि सम्झनालायक दिन होइन । अझ मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको माओवादी र नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको पार्टीका लागि गौरवशाली दिन हुन सक्छ । पूर्व राजाका लागि बिर्सनलायक दिन । माओवादीले राजतन्त्रमाथि धावा बोलेको दिन भएकाले ।
वत् २०६४ मंसिरतिर रोल्पाको होलेरी नजिक दहवनको अस्थायी शिविरमा माओवादी लडाकु बसेका थिए ।